मिर्गौला दान : पुरुष हच्किन्छन्, महिला तम्सिन्छन्
रुबी बीबीएस गर्दै थिइन् । नवाज एसईई दिएर बसेका थिए । एक दिन उनलाई नराम्रोसँग ज्वरो आयो । परिवारले उनलाई जँचाउन अस्पताल लग्यो । ‘गाउँको अस्पतालमा ‘बिरामीलाई काठमाडाँै लैजानुपर्छ’ भनेपछि हामीले नवाजलाई काठमाडौँ ल्यायौँ,’ रुबीले भनिन्, ‘अस्पताल ल्याएर चेक गराउँदा उसको दुवै किड्नी खराब भएको थाहा भयो ।’
रुबीको दुवै दिदीको बिहे भइसक्यो । आमाबुबाको उमेरले नेटो काटिसक्यो । एक जना दिदी एमबीबीएस पढ्न चीन र अर्की फार्मेसी पढ्न भारत गएका छन् । ‘परिवारको सबै जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा छ,’ रुबीले भनिन्, ‘त्यसैले भाइको उपचारमा मै खटेँ । ऊ पढाइमा राम्रो र कान्छो भएकाले हामी सबै उसलाई धेरै माया गर्छौं ।’
मिर्गौला फेल भएको थाहा पाएपछि छोरालाई मिर्गौला दिन नवाजकी आमा तम्सिइन् । यो कुरा रुबीले स्विकारिनन् । ‘यति धेरै छोराछोरी पाएर कमजोर भएकी आमाको ज्यान म थप कमजोर बनाउन चाहन्नथेँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले म आफैँले मिर्गौला दिने सोच बनाएँ । ‘म तपाईंलाई दुःख दिन मात्रै होइन, तपाईंको दुःखमा साथ दिनका लागि पनि जन्मिएकी हुँ’ भनेर आमालाई भनेँ ।’
उनको यो निर्णय कसैलाई मन परेन । यसमा उनलाई कसैले साथ दिएनन् । ‘आमाले ‘म मर्ने बेला भइसक्यो, तिम्रो त पूरै जिन्दगी बाँकी छ’ भन्नुभयो,’ रुबीले भनिन् ।
उनको जिद्दीका अगाडि कसैको केही लागेन । उनले भाइलाई मिर्गौला दिएरै छाडिन् । ‘अपरेसन गर्दा मलाई अलिकति पनि डर लागेन,’ उनले भनिन्, ‘मेरो डरलाई भाइलाई नयाँ जीवन दिँदै छु भन्ने उत्साहले जित्यो ।’ रुबी सानैदेखि कसैको दुःख देख्न नसक्ने स्वभावकी थिइन् । ‘म वरपर भएका कसैको पनि दुःख देख्न सक्दिनथेँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि ऊ त मेरो भाइ थियो । म उसको दुःख झन् कसरी देख्न सक्थेँ ?’
आजभोलि रुबीका आमाबुबा नवाजलाई बारम्बार भन्छन्, ‘अरू छोरीलाई जे गर् गर्, तर हामी मरे पनि तैँले रुबीका आँखामा चाहिँ कहिल्यै आँशु आउन नदिएस् । यसले तँलाई जीवनभरि तिर्न नसक्ने गुण लगाएकी छे । तेरो ज्यान बचाएकी छे ।’
वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले ‘एउटा किड्नीको के भर’ भन्दै अविवाहित महिलालाई समाजले बिहेका लागि अस्वीकार गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘त्यसैले महिलाको केसमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा हामी सकेसम्म विवाहित र बच्चा पाइसकेको होस् भन्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने, अविवाहित महिलाहरू ‘भोलि बिहे नहोला, बच्चा नहोला’ भनेर डराउँछन् । तर, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेकामा पछि गएर बच्चा नहुने समस्या हुँदैन । लिने र दिने दुवैलाई यसले केही फरक पार्दैन ।’
‘अर्धांगिनी’लाई एउटा अंग
आङनुरी शेर्पा, ५७, र दाकी शेर्पा, ५०, ले २७ वर्षअघि भागी बिहे गरेका थिए । त्यही बेला उनीहरूले कसम खाएका थिए– ‘बाँचे सँगै बाँच्ने, मरे सँगै मर्ने ।’
वर्षदिनअघि दाकी बिरामी परिन् । अनुहारमा काला दागहरू आउन थाले । श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि आङनुरीले उनलाई काठमाडौँ लिएर आए । काठमाडौँ टिचिङ हस्पिटल आएर चेकजाँच गरेको केही समयमा नै उनको दुवै मिर्गौलाले काम नगर्ने थाहा भयो । ‘त्यो बेला म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ,’ आङनुरीले भने, ‘यो खबरले मेरो संसारै अँध्यारो पार्‍यो । एकदमै आत्तिएँ ।’
यो मामलामा पुरुषभन्दा महिला निकै महसुर हुने अनुभव इन्द्रबहादुरले गरे । ‘मसँगै अपरेसनमा तयारी गरिरहेका धेरै महिला थिए,’ उनले भने, ‘उनीहरू डराएर, मुटुको ढुकढुकी बढेर अपरेसन रोकिएको कहिल्यै सुनिएन । उनीहरूको एकैचोटिमा अपरेसन हुन्थ्यो ।’ अपरेसन गरेको तीन रात इन्द्रबहादुर घाउ दुखेर निदाउन सकेनन् । ‘एकातिर छोरो बाँचेकोमा खुशी थिएँ, अर्कातिर आफ्नो ज्यान तलमाथि केही होला कि भन्ने डरले सताइरहन्थ्यो ।’
मिर्गौला दाताको संख्यालाई हेर्दा महिलाभन्दा पुरुष स्वार्थी भएको पाउँछन्, डा. काफ्ले । ‘महिलाको तुलनामा पुरुषहरू स्वार्थी देखिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पुरुषहरू पाए लिन्छन्, तर दिन खासै तयार हुँदैनन् । महिलाहरू जसलाई दिन परे पनि निःस्वार्थ भएर दिन्छन् ।’ यसलाई उनी पुरुषप्रधान समाजको उपज मान्छन् । ‘श्रीमान्ले ‘एउटी श्रीमती बिते पनि अर्की पाइहालिन्छ नि’ भन्ने सोच राख्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, महिलाले अर्को श्रीमान्बारे कल्पनासम्म गरेका हुँदैनन् ।’ उनीहरू जस्तोसुकै जोखिम उठाएर भए पनि मिर्गौला दिन तयार हुने उनी बताउँछन् । ‘कसैलाई केही रोगले गर्दा मिर्गौला झिक्न नमिल्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यस्तो बेलामा पनि ‘म मरेर केही हुँदैन, मेरो श्रीमान् बाँच्नुहुन्छ भने मेरो दुवै किड्नी झिकिदिनुस्’ भन्दै आउँछन् ।’
राधाले दुई वर्षअघि श्रीमान् गुमाइन् । ब्लड प्रेसर हाई भएर ढलेका उनका श्रीमान् अस्पताल नपुग्दै बिते । एक छोरा र एक छोरीको जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपर्‍यो । बुबा बित्दा निकेश वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए । विदेश गएको तीन महिना नबित्दै बुबा बितेको खबर सुनेपछि उनी नेपाल फर्किए । बुबा बितेको घाउ आलै थियो । त्यही आलो घाउमा फेरि अर्को घाउ थपियो । निकेशको दुवै मिर्गौला फेल भएको थाहा भयो । ‘म दिनभरि बर्बराउँदै हिँड्थेँ, रातभरि रुन्थेँ,’ राधाले भनिन्, ‘श्रीमान् र छोराको पिरले ६५ किलोको मान्छे ४२ किलोमा झरेँ । श्रीमान् बितेको छ महिना नबित्दै छोराको यस्तो खबरले मलाई नराम्रोसँग गलायो ।’
केही समय धरान र विराटनगरतिरको अस्पताल धाएपछि उनी काठमाडौँ आएकी थिइन् । काठमाडौँ उनका लागि बिलकुलै नौलो थियो । यहाँ पनि उनी थुप्रै अस्पताल चहारिन् । ‘जहाँ लगेर भए पनि छोरालाई बचाउँछु भन्ने संकल्प गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति बेलासम्म मलाई मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबारे केही पनि थाहा थिएन । एक जना आफन्तले पुर्‍याइदिनुभयो ।’ साढे दुई महिना डायलाइसिस चल्यो । उनीहरू काठमाडौँ, कपनमा डेरा गरेर बस्न थालेका थिए ।
अहिलेसम्मको कानुनमा ५० वटा नातेदारभित्र पर्नेले मिर्गौला दिन पाउँछन् । विभिन्न अपराध निम्तने कारणले गर्दा परिवार बाहिरका मानिसले दिन पाउँदैनन् । मिर्गौला दातालाई हेर्ने हो भने पुरुषको तुलनामा धेरै महिला छन् । महिलाको तुलनामा पुरुषहरू यो कुरामा स्वार्थी देखिन्छन् । पुरुषहरू पाए लिन्छन्, तर दिन खासै तयार हुँदैनन् । महिलाहरू जसलाई दिन परे पनि निःस्वार्थ भएर दिन तयार हुन्छन् । हाम्रो समाज पुरुषप्रधान भएको कारणले श्रीमान्हरू ‘एउटी श्रीमती बिते पनि अर्की पाइहालिन्छ नि’ भन्ने सोच राख्छन् । तर, महिला अर्को श्रीमान्बारे कल्पनासम्म गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरू जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि तयार हुन्छन् । ‘म मरेर केही हुँदैन, तर मेरो श्रीमान बाँच्नुहुन्छ भने मेरा दुवै किड्नी झिकिदिनुस्’ भन्दै आउने पनि छन् । कसैको केही रोग लागेर दिनै नमिल्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलामा पनि ‘जसरी भए पनि दिनुस् न, डाक्टर साप’ भन्छन् । तर, परिवारका सदस्यले मिर्गौला दिन्छु भन्दैमा दिन पाइँदैन । ब्लड ग्रुपदेखि धेरै कुरा मेल खानुपर्छ । त्यस्तै सुगर, प्रेसरजस्ता रोगहरू नभएको स्वस्थ व्यक्ति हुनुपर्छ ।
मिर्गौला दाताले पनि मिर्गौला लिनेले जस्तै आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउने, दिनमा १० हजार पाइला हिँड्ने, कम्तीमा सात घण्टा अनिवार्य सुत्ने, स्वास्थ्यवद्र्धक खानेकुरा खाने, जाँडरक्सी र चुरोटको लतबाट टाढै बस्ने, पेनकिलर नखाने गर्नुपर्छ । वर्षको एकचोटि स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ ।
विकसित देशमा ‘बे्रन डेथ’ अर्थात् मस्तिष्क मृत्यु भएकाले आफ्ना विभिन्न अंग दान गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिको मुटु, फोक्सो, कलेजो, आन्द्रा, मिर्गौलालगायत थुप्रै अंग काम लाग्छन् । त्यसले अरू धेरै मानिसलाई जीवन दिन्छ । हाम्रोमा यो अभ्यास एकदमै कम छ ।